EXTRACTNOW ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ် - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
အချို့သောအသုံးပြုသူများပြီးသားကြောင်းကြောင့်ပြုမိသောအခါအတိအကျမှတ်မိကြဘူးဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သင်၏ Google အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ပါပြီ။ သင့်အကောင့်မမျှော်လင့်ဘဲတိုက်ခိုက်ခံရလျှင်ရက်စွဲကိုသိရန်ကြောင့်ကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့လူ့သိချင်စိတ်၏, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်သောကြောင့်ဤအချက်အလက်ကူညီပေးပါမည်ဟူသောအချက်ကိုမသာလိုအပ်ပေသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ငါဘယ်လို Google အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးကြဘူး
ဖန်ဆင်းခြင်းနေ့စွဲသင်အမြဲဆုံးရှုံးနိုင်သည့်, သင့်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပြန်လည်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ - သူတွေကိုအချိန်လေးထဲကနေအဘယ်သူမျှမကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ၎င်းငျး၏အသုံးပြုမှုကိုမှသင့်အကောင့်ကို restore ရန်ကြိုးစားသောအခါ, တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲမနှစ်မြို့ဖွယ်အခွအေနေပေမည်။3မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ပိုင်ရှင်၏ပွနျလညျထူထောငျတောင်းခံသည့်အခါ Google ကနည်းပညာပံ့ပိုးမှုကတည်းကအားလုံးရရှိနိုင်သည့်ဒေတာအရေးကြီးလှသည်:
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့ login ၏အချိန်မှာ password ကိုရိုက်ထည့်သလဲ?
Google မှသင့်အကောင့်ကို restore လုပ်နည်း: ဆက်ဖတ်ရန်
Method ကို 1: ဂျီမေးလ် setting များကိုကြည့်ရန်
Google ကမျှမအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေး၏နေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်. လူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအဓိကအားဖွငျ့ပို့စ်နဲ့ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီ၏အခြားရွေးချယ်စရာန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်, ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ဂျီမေးလ်အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးသွားပါ "Settings" ကိုတစ်ဦး Cog အတူအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှင့်သင့်လျော်သောမီနူးကို item ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်။
tab ကိုသို့ပြောင်းရန် "forward နှင့် POP / IMAP ».
ဤတွင်အဆိုပါလုပ်ကွက်များတွင် "POP ကိုဒေါင်းလုပ်" ရက်စွဲကိုပထမဦးဆုံးစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိညွှန်ပြလျက်ရှိသည်။ ဤစာစဉ်အမြဲစနစ်အတွက်မှတ်ပုံတင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူရရှိသွားတဲ့ထားတဲ့ Google ကနေကြိုဆိုဝန်ဆောင်မှုသတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ရက်စွဲဖန်ဆင်းခြင်း-Google အကောင့်၏နေ့အဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင် POP ကိုအကောင့်ဆက်တင်များကိုအသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသွားရကြပြီမဟုတ်ပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုအစဉ်အမြဲသာလျှင်အတိအကျရက်စွဲကိုညွှန်ပြတော်မမူကြောင်းသတိပြုပါ။ အချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရစစ်ဆေးဖို့အောက်ကရည်ညွှန်းဒုတိယနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုထပ်မံတိုက်တွန်းပါသည်။
Method ကို 2: Gmail ထဲတွင်မက်ဆေ့ခ်ျများရှာရန်
Banal နဲ့ရိုးရိုးလမ်း, သို့ရာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သင်ကအကောင့်အလွန်ပထမဦးဆုံးက e-mail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရပေမည်။
ပုံနှိပ်စကားလုံး « Google က» ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ။ ဤသည်ကိုပိုပြီးလျင်မြန်စွာ Gmail ကိုအသင်းကစေလွှတ်သောအလွန်ပထမဦးဆုံးအစာကိုရှာဖွေပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာရင်း၏အလွန်ထိပ်တန်းလှန်လှောကြည့်နှင့်အချို့သောကြိုဆိုပွဲမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရ, သင်သည်ထိုသူတို့၏အလွန်ပထမဦးဆုံးပေါ် click လုပ်ရပါမည်။
ပေါ်လာသော menu ကိုဤရက်စွဲကို Google အကောင့်၏နိဒါန်း၏နေ့စွဲပါလိမ့်မည်, အသီးသီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျတျောခဲ့ရာတစ်နေ့လျှင်ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျစနစ်အတွက်မှတ်ပုံတင်အတိအကျရက်စွဲကိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဤနည်းလမ်းနှစ်ခုတစ်ခုမှာ။ ငါတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: شرح برنامج ExtractNow4691 (စက်တင်ဘာလ 2019).